Waraaqo Falastiin ku socday oo siddeed sano kaddib soo gaaray - BBC News Somali
Waraaqo Falastiin ku socday oo siddeed sano kaddib soo gaaray
16 Agoosto 2018
Image caption Boqollaal jawaan oo farriimo ah ayaa ugu dambeynti soo gaaray Falastiin
Farriimo, Waraaqo iyo gaariga yar ee ay curyaamiinta ku socdaan oo ku socday Falastiiniyiinta ayaa waxay soo gaareen Israaiil balse in mudda ah ayey haysatay.
Mas'uuliyiin ayaa waxay AFP u sheegeen kala saaridda farriimahaasi iyo cidda lahayd la gaarsiiyo ay laba toddobaad ay qaadaneyso.
Image caption Sida farriinta muuqato oo laga soo diray dalka Moroco 2015 waxaa la hayey in mudda ah
Israa'iil ayaa waxay haysataa xadka urdun ee looga soo tallaabo Marinka Qaza.
Qoraal Talaadadi ka soo baxday wasiirka isgaarsiinta Falastiin Allam Moussa ayaa waxay Israa'iil ku eedeysay iney Israa'iil ku guul darreysatay mel marinta heshiis 2016-ka la gaadhay oo ku saabsanaa in farriimaha caalamiga ah ay oos u soo gaaraan dhulka falastiin iyada oo ay marka hore la soo marin xafiisyada Boostada Israa'iil.
Isku duwaha arrimaha dhaqdhaqaaqa ciidamada Israa'iil ee degaanka Cogat wuxuu wakaaladda wararka ee AFP uu u sheegay heshiisku inuu ku saabsanaa shaqada balse uu faahfaahin intaa ka dher uu bixineyneyn.